RAKOTOARIVELO MAMY : TSY HISY FIFIDIANANA ETO RAHA TSY TONGA ETO RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
RAKOTOARIVELO MAMY : TSY HISY FIFIDIANANA ETO RAHA TSY TONGA ETO RAVALOMANANA
Faly ny tenako hoy ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy androany tolankandro teny Amboanjobe nandritra ny lanonana fifampiarabana teo amin’ny zanak’i Dada, ary misaotra anareo. Miteny ilay zandrikely fa olona 300 no isan’ny Ankolafy Ravalomanana. Dimy alina iisika ireto hoy izy fa aoka tsy hifamitaka sao dia ny anao no 300. Ny ankolafy Ravalomanana hoy Mamy, dia tsy mila artista fa fitiavana no nahatongavana eto androany. Fifampiarabana tratry ny taona no ataontsika fa misy hafatra tiana hampitaina. Faly miarahaba antsika hoy izy noho izao taona vaovao izao. Mankasitraka sy mankatelina amin’ny teny nataonareo parlemantera teo. Mirary so amba ho taom-pahombiazana ho antsika ity taona ity, ary hiverina alohan’ny fifidianana I Dada. Efa mivory ny Troika Sadc hoy Mamy ka ho hitantsika eo ny valiny. Hikapa ahita ny vaniny isika indrindra ny fahasalamana far aha tsy tomombana izany tsy afaka hitsena an’iDada. Na dia tsy te hijery azy ny tena hoy Mamy ny amin’izay voalazan’I zandrikely dia te hilaza izy fa izy irery no nahavita teto Madagasikara. Paiso daholo izany ny mpitarika sy ny mpanao politika . Satria ve hoy Mamy izy no nahavita hopitaly ho an’ny vahoaka madinika. Handoavambola anefa izany ka ny vahoaka madinika ve ahavita izany. Nanao ny colésium izy nefa ny Palais de sport aza tsy feno. Aoka tsy hofitahina ny vahoaka fa tsy izany no laharam-pahamehana fa ny fahorian’ny vahoaka tsy mandady harona. Vahoaka efa mitrongy vao homana hoy Mamy no ilazaonao manao hopitaly manaram-penitra nefa natao ho an’ny mpanam-bola fa tsy ho an’ny vahoaka. Milaza indray izy fa tompon’andraikitra ny governemanta amin’ny tsy fahavitan’ny fifdiianana. Fa iza no filohan’ny tetezamita hoy Mamy ary iza no tomponandraikitra raha misy tsy fahavitan’ny fifidianana. Mbola mampitahotra izy. Olona matahotra fifidianana hoy izy izany satria matahotra ho resy. Amin’ny fifidianana manaraka eo dia sahiko ny milaza fa ny Ankolafy Ravalomanana no mandresy, ary hiverina amin’ny filoha Ravalomanana Marc ny fitondrana. Isika hoy Mamy no afaka hitondra ny tany sy ny firenena. Ny Tgv hoy izy manana solontena ao amin’ny Cenit ka maninona no tsy naharesy lahatra ny fikambanana iraisma-pireenna. Tsy maintsy tanteraka io fifidianana filoham-pirenena amin’ny 24 jolay io sy ny fifidianana dépiote 25 septambra. Tsy niteny aho hoy Mamy hoe 2eme tour fany Ankolafy Ravalomanana dia 1er tour dia vita. Aoka atsahatra eon y fampihorohoroana heo tsy hanaiky ny vokam-pifidianana. Ny olona manao izany hoy izy dia mampihorohoro. Amiko dia tsy tokony hanome lesona izany olona mampihorohoro amin’ny fifidianana izany. Tsotra ny antsika hoy Mamy hatarmin’izao na amin’ny manaraka hamafiso ny firaisankina. Aoka tsy ho avy aty amintsika no hizarazara. Lahiniriko hoyizy nilatsaka dia niady an-trano izy ireo. Atambaro ny hery. Matokia ianareo anay mpitarika. Ny tanjona dia iarahatsika manaiky amin’izao fotoana izao dia ny famerenana ny filoha Ravalomanana Marc izay hikelezantsika aina. Ankoatra izay dia nisy ny fanontaniana napetraka tamin’ny filohan’ny Ct Mamy Rakotoarivelo. Nambarany fa ny fotoana androany dia fifampiarabana.
Ny fangatahan’ny Ankolafy Ravalomanana dia fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc eto. Tsy hisy fifidianana eto hoy Mamy raha tsy tonga eto izy. Ny fifdiianana hoy izy dia mizara roan y fikarakarana azy. Misy lafiny teknika izay io no nahatonga ny Cenit sy ny fikambanana iraisam-pirenena hanemotra izany. Izahay kosa hoy izy dia mamaetraka fa tsy maintsy apetraka eto ny lafiny politika ka ao anatin’izany ny fametrahana fitoniana politika eto Madagasikara mba ahazoana manatanteraka fifidianana ao anatin’ny fitoniana sy manaraka ny demokrasia indrindra fa eken’ny rehetra. Tsy sanatria hoy izy hiteraka fifanoherana rehefaavy eo ka hiditra krizyhafa indray isika. Izay hoy Mamy no nahatonga anay nametraka mazava fa ekenay ny datim-pifidianana. Nambarany ihany koa fa tsy hisy filaminana eto raha tsy mipetraka ny fampiharana ny tondrozotra ny andininy faha 16,17, 19, ary indrindra ny 20. Ampiharo antskany sy andavany hoy izy ny tondrozotra fa tsyizay mety aminareo no atao na izay mahasoa anareo. Aoka tsyho fahanana lainga ny vahoaka Malagasy fa rehefa tsy hampiahatra ny tondrozotra dia mametraha fialana satria fandraisana andraikitra no tadiavina amin’ny filoha tetezamita. Raha tsy tanterahina ireo dia handray fepetra izahay hoy Mamy ka izany dia tsy fandraisana anjara amin’ny fifdiianana amin’ity taona ity.
11 pensées sur “RAKOTOARIVELO MAMY : TSY HISY FIFIDIANANA ETO RAHA TSY TONGA ETO RAVALOMANANA”
Andriamatoa mamy rakotoarivelo a!, Mahavelom-bolo ilay kabary, fa ahonana ny momba ny frantsay tsy mamalan-tsika foana izao, i Golgblatt fa manizingizina fa i Dada tsy miverina alohan´ny fifidianana, ireo feno miaramila frantsay eto, ary mampinatra ny miaramila Mlagasy, haninona?#
dia ahoana ny fiarovana ny ain´i DADA?
dia ahona aloha ireo gadra-politika, tsy misy hevitra ny ivoahany mialoha ve sa mandry ny fifidianana ? Mijaly anie ireo olona ireo sy ny fianakaviany ?
Misaotra ny mpiaramitolona tonga maro, enga anie ka ahatarika olona maro avy ireo tonga anio ireo,ary hiaraka hitseana an´i DADa, fa efa leo sy mijaly ny vahoaka,
Ary rehefa tsy ao @ ville ny hetsika dia mahaomby an!!!
mba mahatsikaritra izany koa ve ianareo ray olona????mahagaga!!!
Homba antsika Andriamanitra e!!!tsy maintsy tonga dada ary hitondra ny tany sy ny fanjakana.
Misy fetrany ny asan’i satana e!!!tsy maintsy mbola ho avy ilay maraina ary hibaliaka mandrakizay,
sa moa 2018 indray hiverina ilay zanak’alika???manonofy!!!!mihevitra ny ho afa-maina eo ngaha ity izy???
tena efa mitonantonana a!!
Dia asio asa MIVAINGANA amin’izay ary fa efa heno indray izay ilay fampandriana adrisa lava eeeeeeee
ela2 indray ny akama izany an!!sa niova narana indray??
tsara mandry indray ary e!
Za koh mankasitraka ny vahoaka malagasy izay mahatsapa fa tena hilaina ny manohitra izao fitondram-
poza izao na dia manaiky sy nanolotra an’i domelina ary nametraka azy teo aza ny MPITARI-BATO VILAM
-BAVANTSIKA ity, am-bava tsy mila nefa MANKASITRAKA AZY TSY SA SATRA NY MANDANY IZAY
HILAIn’i domelina any toy ity » FITIA » IZA NO NANDANY IO « FITIA « IO??? nefa mba mody be resaka eo
tsy hita izay fanapahana mba HENTITRA.
RAHOVIANA ARY NY GADRA NO HAVOAKANAREO MPITONDRA AO E????
DIA NY HAINO AMAN-JERY TOMPOKO ô!!!HIFIDY @ FOMBA AHOANA NEFA RADIO HANELEZAN-KEVITRA
AZA TSY MISY???RAHOVIANA NO HILAINAY FA TSY RESA-BE LAVA EFA HENONAY FOANA .
10 février 2013 à 6 h 43 min
HO HITANTSIKA REHETRA EO IZAY HIAFARANY – TSY MATAHOTRA FRANTSAY IZANY AKORY – IREO ANIE MPAMENDROFENDRO E – FANTATRINTSIAKA TSARA – REHEFA VOA AMIN’NY ATAONY IZY DIA MAMENDROFENDRO SISA E ! MPANJANAKA IREO ARY MANAO RATSY KOA NO SADY MIFONO HEVIDRATSY NY SAINY KA TSAROVY FA HIVERINA AMINY IHANY NY ATAONY
misaotra mr Mamy fa minjaly ny vahoaka de miandry ny presinde ny vahoaka mirary anao ho tonga soa mr presindent Ravalomana filoha hanjaina mivady tongava soa
Ny vahoaka dia MILA MAHITA AN’IREO MPITARIKA ISAKY NY FARAN’NY ERINANDRO ENY AMIN’NY MAGRO ! MANAO TATATITRA AN’IZAY ASA NATAONY SY NY VOKANY, ARY MILAZA NY TENA MARINA AMIN’NY VAHOAKA !
Un train sans locomotive, capable et surtout décidé de tirer la rame ne sert à rien !!! L’exemple Tézévé est plus que probant ! Le machiniste en est-il conscient ?
10 février 2013 à 20 h 59 min
Efa izay no nifanarahana t@ voalohany dia niitrika tsikelikely
avy eo anie e!hoe: isan-kerinandro manao tatitra, k’inona moa no
tatitra hatao eo koa fa efa tsy tafavoaka ny baolina.
Resaka » locomotive » manana io film io aho ilay efa taloha be mbola « cassette video »
liana be ery aho mijery azy.
Ny tiako ho hita izao dia hoe, nanoratra tany amin’i Hollande ve « izy mianakavy », nilaza fa ytsy azo ekena ny fitsabahan’i Lafrantsa lava amin’ny raharahan’ny malagasy ? Amin’izay indray mbola milaza zavatra TSY MIFANARAKA AMIN’ILAY TONDROZOTRA ?
Maro ny ohatra, fa dia santionany iray fotsiny izay !
Hiran’i domelina tézévé, izay manahy mafy fa hilaozan’ny akamany ! Ny ary efa voakararan-dry zalahy !
Andramana an’ity indray ary ê ! Raha tsy mande, dia sabotée ny loco !
10 février 2013 à 23 h 21 min
Nndrryyyy! Ny omby mahia tsy lelafin’ny namany.
Ny tody tsy misy fa…….firi2 izay no nataony tohatra hiakarana
dia nodakany, aza matahotra ny aminy fa efa be ny azony e! voavidiny izao tontolo izao.
Précédent Article précédent : ANKOLAFY RAVALOMANANA : HAMPISEHO NY HERINY RAHAMPITSO
Suivant Article suivant : ME RAZAFIMANATSOA HANITRA : ANY AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NY PASSEPORT- NY